Izazi-mlando ziye zachonga utshintsho kwezinye ze-Europe ezihamba phambili kwii-monarchies eziphakathi kwe-15 ukuya kweyeshumi elinesibhozo-ntsuku ze-16, kwaye zibize umphumo 'weeNew Monarchies'. Ookumkani kunye namakhosikazi zale ntlanga babuthana ngamandla amaninzi, baphelisa iingxabano zomphakathi kwaye bakhuthaza uqoqosho kunye nokukhula koqoqosho kwinkqubo ebonwe ukuphelisa uhlobo lwamaxesha aphakathi karhulumente kunye nokudala i-modern one.
Impumelelo yeeNew Monarchies
Ukutshintsha kobukumkani ukususela kwixesha elide ukuya kutshatyalaliswa kwangaphambili lihamba kunye nokuqokelela kwamandla athile ngetrone, kunye nokuncipha kwamandla e-aristocracy.
Ukukwazi ukuphakamisa nokuxhasa imikhosi kwakunqandekile kukumkani, ukuphelisa ngokugqibeleleyo inkqubo ye-feudal yemithwalo yemikhosi ekuzikhukhuleni kwamandla kunye negunya elincike kakhulu kwiminyaka emininzi. Ukongezelela, imikhosi emimandla emimandla yamandla yadalwa ngamakhosi ukuba aqinisekise, agxininise nokukhusela izikumkani zawo kunye nabo. AmaNobles ngoku kufuneka asebenze enkundleni yasebukhosini, okanye athenge, kwiiofisi, kunye nalabo abaneendawo ezizimeleyo, njengamaDukes aseBurgundy eFransi, bathengwa ngokuqinile phantsi kolawulo lwezithsaba. Icawa nayo yabona ukulahlekelwa kwamandla - njengokukwazi ukubeka iiofisi ezibalulekileyo - njengokuba i-monarch entsha ithatha ukulawula ngokuqinile, ukusuka eNgilani eyaphula kunye neRoma, eFransi eyayinyanzela uPapa ukuba avumelane ngokudluliselwa kwamandla ikumkani.
I-centralized, urhulumente olawulayo uvele, ukuvumela ukuqokelelwa kweerhafu ebonakalayo kunye nokusabalalisa, okuyimfuneko ukuxhaswa umkhosi kunye neeprojekthi ezikhuthaza amandla omlawuli.
Imithetho kunye neenkundla ze-feudal, eziye zahlala zigqithiselwe kubaphathi, zagqithiselwa kumandla wesithsaba kunye namagosa obukhosi abanda kwinani. Ukwazisa kaZwelonke, kunye nabantu abaqala ukuzibona njengengxenye yelizwe, baqhubeka nokuguquka, bakhuthazwa ngamandla olawulo, nangona iindawo eziqinileyo zengingqi zihlala zihleli.
Ukuhla kweLatini njengolwimi lwaseburhulumenteni kunye nabahlali, kunye nokutshintshwa kwalo ngeelwimi zaseburhulumenteni, kwanokukhuthaza umanyano omkhulu. Ukongezelela ukwandisa ukuqokelela irhafu, ama-debt yelizwe yokuqala ayenziwe, ngokuqhelekileyo ngokusebenzisa amalungiselelo kunye nababhanki bentengiso.
Iimbali-mlando ezamkela imbono ye-New Monarchies ziye zafuna imvelaphi yale nkqubo. I-force force yokuqhuba ngokuqhelekileyo idla ngokuba yimpikiswano yempi - yona ingcamango ephikisana kakhulu-apho iimfuno zemikhosi ekhulayo zikhuthaza ukukhula kwenkqubo ekwazi ukuxhasa kunye nokukhusela ngokukhuselekileyo umkhosi omtsha. Kodwa ukukhula kwabantu kunye nokuchuma kwezoqoqosho kuye kwacatshulwa, ukukhupha iibhobho zobukhosi kunye nokuvumela nokukhuthaza ukuqokelela kwamandla.
Kwakukho ukuhlukahluka kwesithili kwimihlaba yaseYurophu, kwaye impumelelo kunye nokungaphumeleli kweNew Monarchies kwahluka. ENgilani phantsi koHenry VII, owawuqinisa ilizwe kwakhona emva kwemfazwe yenkqubela, kunye noHenry VIII , owaguqula icawa waza wanika amandla itrone, udlalwa njengomzekelo woMkhosi omtsha. UFrance waseCharles VII noLouis XI, owaphula amandla amaninzi amaninzi, ngumnye umzekelo oqhelekileyo, kodwa iPortugal nayo ibhekiswe ngokuqhelekileyo.
Ngokwahlukileyo, uBukumkani Oyingcwele baseRoma - apho umbusi wayelawula isigqeba esingabonakaliyo samazwe amancinci - yinto echasene ngqo neempumelelo zeNew Monarchies.
Iimpembelelo zeNew Monarchies
IiNew Monarchies zihlala zikhankanywe njengento ebalulekileyo ekunyukisweni kolwandle kweYurophu eyenzeka ngexesha elifanayo, ukunika iSpeyin nePortugal kuqala, kwaye ke iNgilani naseFrance, iindawo ezinkulu kunye neengcebo eziphesheya kwamanye amazwe. Bakucatshulwa ngokubeka umgangatho wokunyuka kwamazwe anamhlanje, nangona kubalulekile ukugxininisa ukuba 'abangekho isizwe esichazelayo' njengoko umgaqo wesizwe awuzange uphumelele ngokupheleleyo.
Ukunyuka nokuwa kwe-Famous Kommune 1
Imbali yase-Ireland: i-1800s
Isikhokelo soMqala kwiNkcazelo
Ukuphila Ubomi Bokufa Ngaphambi KoMhlaba
IJazz ngeShumi: ngo-1930 ukuya ku-1940
IiKick Free kwiChola
Amaqiniso Ngentaba Everest: Intaba ephakamileyo kunazo zonke kwihlabathi
I-10 yeyona ndawo ihamba phambili kwi-Soccer